Ubungako: Izibalo Zeselula Zabenzi Bezinqumo | Martech Zone
Ubungako: Izibalo Zeselula Zabenzi Bezinqumo
Ukulinganisa kuyinto isicelo mobile elula analytics ipulatifomu yabathuthukisi yokuhlanganisa. Ipulatifomu ifaka ukuhlaziywa kwesikhathi sangempela, amadeshobhodi asebenzisanayo, ukugcinwa yiqembu, ama-funnel asheshayo abuyayo, umlando womsebenzisi ngamunye nokuthunyelwa kwedatha.
Amasu wochwepheshe, amabhizinisi namabhizinisi afaka nokuhlaziywa kwemali engenayo, ukuhlukaniswa kwabasebenzisi, imibuzo enziwe ngezifiso, ukukhangisa okuchazayo analytics, ukufinyelela okuqondile kwedatha nokuhlanganiswa ngokwezifiso kuye ngephakheji oyibhalisele.
Ukuhlanganiswa ne-Amplitude kudinga kuphela umugqa owodwa wekhodi kuhlelo lwakho lokusebenza. Uma sekuhlanganisiwe, uzolandelela abasebenzisi abasebenza nsuku zonke, masonto onke, nabanyanga zonke, amaseshini, ukugcinwa, izinhlobo zedivayisi, ipulatifomu, izwe, ulimi, inguqulo yohlelo lokusebenza, indawo, nokuningi ngaphandle kwebhokisi. Faka umugqa wekhodi ukuze ulandelele imicimbi eyengeziwe ngaphakathi kweseshini.
Ukubika Ukugcinwa Kwe-Amplitude:
Tags: ubukhuluukubikwa kwefanelianalytics mobileizibalo zohlelo lokusebenza lweselulaukugcinwa kohlelo lokusebenza lweselulaizibalo zohlelo lokusebenza lweselulaukugcinwa kohlelo lokusebenza lweselulaukubikwa kokugcinwa